Firenena 33 no manambara fandrarana sy fameperana vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Firenena 33 no manambara fandrarana sy fameperana vaovao
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny vao hita Omicron Ny fiparitahan'ny coronavirus dia nanery fanjakana maro hanidy maika ny sisin-taniny amin'ny sasany na ny vahiny rehetra tonga.
Amin'ny ezaka hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19 Omicron Miovaova amin'ny faritaniny, firenena 33 eran'izao tontolo izao no nanambara ny fandraràna mivantana na ny fameperana fitsangatsanganana isan-karazany amin'izao fotoana izao.
Ny haavon'ny hamafin'ny fanaraha-maso sisintany dia miovaova isaky ny firenena, miaraka amin'i Shina, Isiraely, Maraoka ary Japana manidy tanteraka ny sisin-taniny, fa ny fanjakana hafa dia manamafy ny protocole fitiliana COVID-19 any amin'ny sisintany.
Fenoy ny fandrarana ny fahatongavana any ivelany
Sina - Efa nisy ny fanaraha-maso hentitra ny sisintany i Shina, ka ny olom-pirenena sy ny tompon'ny fahazoan-dàlana honina ihany no mahazo miditra ao amin'ny firenena.
Israel - Noraran'ny Isiraely tsy hiditra ao amin'ny firenena mandritra ny 14 andro ny vahiny. Ny olom-pirenena israeliana dia afaka miverina any an-tanindrazana saingy mila manao confinement, na dia vita vaksiny tanteraka aza.
Japon - Nakaton'i Japana ny sisin-taniny tamin'ny tsy olom-pirenena nandritra ny iray volana, anisan'izany ny mpianatra amin'ny fifanakalozana vahiny sy ireo mandeha amin'ny raharaham-barotra.
Maraoka - Nofoanan'i Maraoka ny sidina rehetra tonga nandritra ny tapa-bolana.